Miarinarivo : Mpitondra môtô maty tsy tra-drano -
AccueilSongandinaMiarinarivo : Mpitondra môtô maty tsy tra-drano
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena voalohany. Mpitondra môtô indray no nifanehitra tamin’ny taksiborosy “sprinter” teny an-toerana omaly maraina, tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tany ho any. Olona iray avy hatrany no namoy ny ainy, raha toa ka miady amin’ny fahafatesana noho ny fahavoazany ny iray tamin’ireo mpandeha môtô, izay nanao taingin-droa. Araka izany, teo amin’ny fiholanana izay efatra kilometatra tsy hiditra an’i Miarinarivo no nitrangan’ny loza. Raha ny tatitra voaray avy amin’ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana teny an-toerana avy any Miarinarivo, ary hihazo an’Arivonimamo ireto mpandeha môtô no nifanehitra tamin’ilay fiara taksiborosy sprinter avy nanao asa fitaterana tany Analavory.
Ny loharanom-baovao voaray hatrany no nahalalana fa samy nandeha ny andaniny sy ny ankilany, ka teo amin’ny fiholanana izao tra-doza izao. Azo lazaina ho tsy nifankahita ihany koa ireo mpamily tamin’izany, ka niafara tamin’ny famoizana aina. Tsy nisy azo natao intsony intsony raha ny tatitra nandritry ity fahavoazana ity, noho ny lalana somary tery. Nitsirara teny afovoan’arabe ireto farany no noraisin’ny olona. Ankoatra ity namoy ny ainy ity, fantatra fa naratra mafy ihany koa ny lehilahy iray, izay nitaingina niaraka tamin’ity nitondra ny môtô avy aoriana. Nentina eny amin’ny hopitaly ny tenany, ary mbola ahiana tanteraka ny fahasalamany amin’izao ora anoratanay izao, raha ny loharanom-baovao hatrany. Hita taratra ny fahasimban’ireo fiara sy ity môtô niharan-doza ity. Nidina teny an-toerana nanao ny fanadihadiana taorian’izay kosa ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana, fa ilay mpamily ny fiara kosa notanana natao famotorana eny amin’ny biraon’ny zandary. Matetipi-tranga ny lozam-piarakodia eny amin’ny lalam-pirenena voalohany tato ho ato, Namoizana ain’olona sy handratrana olona maro hatrany izany noho ny hetraketraky ny mpamily amin’ny fampisana ny lalana. Fehiny ny tsy fitandremana sy ny fifaninanana ataon’ireo mpamily no mahatonga ny loza.
Mailhol André Christian Hitondra vina sy fahazavana ho an’i Madagasikara Efa manana ny vina maty paika avokoa ireo kandidà ho Filoham-pirenena. Efa manomboka ihany koa ny fitetezam-paritra ataon’izy ireo amin’ny fanatonana ny vahoaka. Fa ho ...Tohiny